Ogaden News Agency (ONA) – Bam-Gacmeed Lala Beegsaday Askarta Wayaanaha Oo Khasaare gastay.
Bam-Gacmeed Lala Beegsaday Askarta Wayaanaha Oo Khasaare gastay.
Posted by Dulmane	/ October 29, 2017
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Ginji ee Gobolka Oromia ayaa sheegaya qarax khasaare gaystay oo lala beegsaday saldhig ay ciidanka wayaanuhu kuleeyihiin gudaha magaalada.
Sida xogta aan kuhelayno qarax bamka gacanta laga tuuro loo adeegsaday oo habeenimadii xalay lala beegsaday ayaa inta laxaqiijiyay lagu dilay 2 kamid ah ciidanka wayaanaha halka 4 kalana uu kasoo gaadhay dhaawacyo kala duwan oo qaar kamid ah ay aad uliitaan.
Magaalada Ginji oo udhaxaysa magaalooyinka Ambo iyo Addis Ababa ayaa kamid ah meelaha saldhiga u ah kacdoon wadayaasha ree Oromia, waxaana magaalada kadhacay dhorw qarax oo lala beegsaday askarta wayaanaha sidoo kalana waxaa magaalada kadhacay dagaalo foolka fool ah oo udhaxeeya kacdoon wadayaasha iyo ciidanka gumaysiga.
Sidoo kale waxaa maalin nimadii shalay deegaanadaas lagu aasay 10kii dhalin yarada ahaa ee ciidanka wayaanuhu ay ay Jamcadii lasoo dhaafay laayeen waxaana lasoo sheegayaa kacdoono xoogan oo deegaanadaas ka aloosan.
Dhinaca kale dowlada Maraykanka iyo Midowga Yurub ayaa sheegay in ay xukuumada wayaanaha kala hadleen arimo badan oo ay kamid yihiin amaanka iyo xuquuqul insaanka, waxayna dowlada Maraykanka iyo Midowga Yuruba simidaysan usheegeen in ay xukuumada wayaanuhu balantii kaga baxday.
Xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa dhex musheexaysa sicir barar siyaasadeed iyo khal khal amni iyo waliba burbur dhaqaale oo saameeyay min tuulo ilaa iyo gobol waxayna dadka siyaasada falan qeeya sheegayaan in hadaan wadanka labadbaadinin uu umuuqdo mid siidhimanaya.